Jeremiya 15 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
15 Zvino Jehovha akati kwandiri: “Kunyange dai Mosesi+ naSamueri+ vanga vakamira pamberi pangu, mweya wangu waisazombova nehanya nevanhu ava.+ Ndaizovadzinga pamberi pechiso changu, kuti vabude vaende.+ 2 Zvino kana vakati kwauri, ‘Tichabuda tichienda kupi?’ iwe utiwo kwavari, ‘Zvanzi naJehovha: “Munhu wose akafanirwa nedenda rinouraya, achaenda kudenda rinouraya! Munhu wose akafanirwa nebakatwa, achaenda kubakatwa! Munhu wose akafanirwa nenzara, achaenda kunzara!+ Munhu wose akafanirwa nokutapwa, achatapwa!”’+ 3 “‘Ndichaita kuti zvinhu zvina zvive nesimba pavari,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘bakatwa kuti riuraye, imbwa kuti dzizvuzvurudze, zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga+ uye mhuka dzepanyika kuti zvidye uye zviparadze. 4 Ndichavaisa kuumambo hwose hwenyika kuti vagwagwadze+ nokuda kwaManase mwanakomana waHezekiya, mambo waJudha, nokuda kwezvaakaita muJerusarema.+ 5 Nokuti ndiani achakunzwira tsitsi, haiwa iwe Jerusarema, ndiani achachema newe,+ uye ndiani achatsauka kuti abvunze kuti wakadini?’ 6 “‘Iwe wakandisiya,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Unoramba uchifamba uchidzokera shure.+ Ndichakutambanudzira ruoko rwangu ndokuparadza.+ Ndaneta nokuzvidemba.+ 7 Ndichavaurutsa neforogo+ pamagedhi enyika yacho. Ndichaita kuti vashayikirwe nevana.+ Ndichaparadza vanhu vangu, zvavasina kutendeuka panzira dzavo.+ 8 Chirikadzi dzavo dzava zhinji kwandiri kupfuura jecha remakungwa. Ndichaunzira amai nejaya mupambi ari masikati.+ Ndichaita kuti vangoerekana vawirwa nokunetseka nokuvhiringidzika.+ 9 Mukadzi akabereka vanomwe aparara; mweya wake wafemereka.+ Zuva rake ravira achiri masikati;+ ranyara uye ratsverudzwa.’ ‘Vakasara vavo ndichavaurayisa nebakatwa pamberi pevavengi vavo,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.” 10 Ndine nhamo,+ haiwa amai vangu, nokuti makandibereka, ini murume wokungopopotedzana uye murume wokungokakavadzana nenyika yose.+ Handina kukweretesa, uye ivo havana kundikweretesa. Vose zvavo vari kundituka.+ 11 Jehovha ati: “Chokwadi ndichakushumira nokuda kwezvakanaka.+ Chokwadi ndichakureverera pamuvengi munguva yokutambudzika+ nomunguva yenhamo.+ 12 Munhu angagura-gura simbi, simbi inobva kuchamhembe, uye mhangura here? 13 Pfuma yako nezvinhu zvako zvinokosha ndichazvipa kuti zvingopambwa,+ kwete nokuda kwomutengo, asi nokuda kwezvivi zvako zvose, kunyange munharaunda dzako dzose.+ 14 Ndichaita kuti vapfuure nevavengi vako vachipinda munyika yausina kuziva.+ Nokuti moto wabatidzwa ndakatsamwa.+ Wapfutidzirwa imi.” 15 Imi makaziva.+ Haiwa Jehovha, ndiyeukei,+ mufunge nezvangu, munditsivire vatambudzi vangu.+ Musandibvisa pakunonoka kutsamwa kwenyu.+ Cherechedzai kutsungirira kuzvidzwa kwandiri kuitwa nokuda kwenyu.+ 16 Mashoko enyu akawanikwa, ndikaadya;+ uye kwandiri shoko renyu rinova kupembera nomufaro+ uye kufara kwomwoyo wangu;+ nokuti ndanga ndichishevedzwa nezita renyu,+ haiwa Jehovha Mwari wemauto.+ 17 Handina kugara pasi muboka revanoshamwaridzana revaya vanoita musere+ ndikapembera nomufaro.+ Ndakagara pasi ndiri ndoga nokuda kworuoko rwenyu,+ nokuti makandizadza nokutsamwa.+ 18 Nei kurwadziwa kwangu kwaramba kuripo+ uye ronda rangu risingarapiki?+ Raramba kupora. Chokwadi kwandiri munova sechimwe chinhu chinonyengera,+ semvura isingagoni kuvimbwa nayo.+ 19 Naizvozvo zvanzi naJehovha: “Kana uchizodzoka, ipapo ndichakudzosa.+ Uchamira pamberi pangu.+ Kana uchizobudisa zvinhu zvinokosha pazvinhu zvisina zvazvinobatsira, uchava somuromo wangu. Ivo vachadzoka kwauri, asi iwe hauzodzokeri kwavari.” 20 “Ndakuita rusvingo rwemhangura rwakasimbiswa kuvanhu ava;+ ivo vacharwa newe, asi havazokukundi.+ Nokuti ini ndinewe, kuti ndikuponese uye kuti ndikununure,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 21 “Ndichakununura muruoko rwevakaipa,+ uye ndichakudzikinura muchanza chevadzvinyiriri.”